Izahay dia mizara kely momba ny fahazoana fa tsy ampy ny momba fitazonana ny mpanjifa. Ny paikadim-barotra lehibe dia tsy tsotra toy ny fitarihana fitarihana bebe kokoa, momba ny fitondrana fiara mitarika mety ihany koa izany. Ny fitazonana ny mpanjifa dia ampahany foana amin'ny vidin'ny fahazoana vaovao.
Miaraka amin'ny areti-mandringana, nidina tampoka ireo orinasa ary tsy dia mahery setra tamin'ny fahazoana vokatra sy serivisy vaovao. Ankoatr'izay, ny fivoriana fivarotana olona sy ny kaonferansa momba ny varotra dia nanakana ny paikadin'ny fahazoana orinasa amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Raha nitodika tany amin'ny fivoriana sy hetsika virtoaly izahay dia nihamafy ny fahafahan'ny orinasa maro hitondra ny varotra vaovao. Midika izany fa ny fanamafisana ny fifandraisana na ny fampiakarana mpanjifa ankehitriny aza dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny vola miditra sy ny orinasan'izy ireo.